लोकगीतको भिडियोले मौलिक संस्कृति मारेको छ – Rajdhani Daily
लोकगीतको भिडियोले मौलिक संस्कृति मारेको छ
कुनै पनि कुरा लुकाउनै आउ“दैन, उनलाई । चित्त नबुझे फ्याट्ट भनिहाल्छिन् । ‘गु्रपिज्म’को सिकार थुप्रैपटक भइन् । हात परिसकेको काम एकैछिनमा खोसिएको तीतो अनुभव पनि छ, उषा खनालस“ग । ‘त्यस्तो बेला एकदमै दुःख लाग्छ,’ भन्छिन्, ‘अर्काको पेटमाथि लात हान्नु सबैभन्दा ठूलो पाप हो ।’
दाङ, लमहीको सरस्वती उच्च माविमा पढ्दादेखि नाटक–नृत्यमा रुचि थियो, उनको । थुप्रैपटक भाग पनि लिइन् । कला क्षेत्रमा जम्ने सानैदेखिको रुचिले उनलाई काठमाडौंसम्म डो¥यायो । २०५० सालमा जन्मिएकी उषाको ‘करिअर’ २०७१ सालबाट सुरु भएको हो । म्युजिक भिडियो निर्देशक शिव विकले देख्नेबित्तिकै उनलाई ‘अफर’ गरिहाले । उनका लागि ‘ढुंगा खोज्दा देउता भेटे’झंै भयो ।‘बीच बाटो’ र ‘लाले’ फिल्ममा नायिका बनिसकेकी उषासँग शुक्रबार राजधानी दैनिकको कार्यालयमा युमाश शेर्पाले गरेको सटकट संवाद :
अब कुन फिल्म आउ“दै छ ?
‘खतरनाक’मा अतिथि भूमिका निर्वाह गरेकी छु । त्यसमा सञ्चिता लुइ“टेललगायत थुप्रै कलाकार छन् ।
पहिलो म्युजिक भिडियो गरेको याद छ ?
त्यतिबेला २० वर्षकी थिएँ । शिव विकले नै ‘चान्स’ दिनुभएको थियो ।
काठमाडौं आउनेबित्तिकै काम पाइएछ नि ?
त्यस मामिलामा अलि लक्की रहेछु । साथीकै कारण तुरुन्तै काम पाए“ ।
म्युजिक कति वटा पुगे ?
७० बढी होलान् ।
कमाइ राम्रै भएछ नि ?
त्यस्तो केही छैन । आफ्नै लागि मात्र भएको छ ।
एउटा म्युजिक भिडियोको पारिश्रमिक कति आउ“छ ?
भन्नु र ? खोइ के भन्ने ?
‘डिमान्ड’चाहि“ कति हो ?
२० हजारसम्म भन्ने गरेकी छु । चिनेजानेको छ भने त्योभन्दा धेरै कम पनि हुन सक्छ ।
कुन गीतबाट मोडलिङ सुरु भयो ?
सुरुमा दोहोरी गीतमा काम गरें । पछि मन लागेन, छोडिदिए“ ।
लोकगीत र दोहोरीमा छाडापन बढी आयो । त्यो मन परेन । लोकगीत भन्ने अनि नांगै नाचेर त भएन नि † लोकगीतका म्युजिक भिडियोले नेपाली संस्कृति मारेको छ । यो त ‘टिपिकल’ पो हुनुपर्छ ।
यसो भन्दा रिसाउलान् नि ?
मलाई मतलब छैन ।
भोलि फेरि काम दिएनन् भने ?
मेरा लागि कामको खा“चो छैन । भएको कुरा भन्न किन डराउने ? लोकगीतमा अब काम गर्ने मन पनि छैन । मेरो काम मन पर्नेले मलाई नै खोज्दै आउँछन् ।
आधुनिक गीतमा गर्छु । फिल्मबाट ‘अफर’ आइरहेको छ ।
फिल्म बनाउने सोच पनि छ कि ?
छ । योजना बन्दै छ । एक्लैले त सक्दिन“ । कसैस“ग मिलेर गर्छु होला ।
यो क्षेत्रप्रति यति धेरै आकर्षण किन ?
के–के नै होला भनेर आउने बढी छन् । बाहिरबाट हेरेजस्तो छैन यो क्षेत्र । भित्र अर्कै कुरा हुन्छ । कलाकार लाइन ‘पब्लिक फिगर’ पनि हो । ‘मेन्टेन’ गर्न गाह्रो छ ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ ?
हो । बाहिरबाट आउनेलाई अझ गाह्रो छ । फ्ल्याट भाडा र लत्ताकपडा जोहोमै बढी खर्च हुन्छ । कला क्षेत्रको पैसा आफ्नै लागि मात्र हो । घरका लागि केही पनि गर्नुपरेको छैन ।
काठमाडौंमा को–को छन् ?
बुबाआमा सबै ।
दिन कतिको व्यस्त हुन्छ ?
भर्खरै एउटा म्युजिक भिडियो सकियो । ‘सेलेक्टेड’मात्रै गर्न थालेकी छु त्यसैले अलि कम व्यस्त छु । बीचमा बिरामी पनि परें ।
मेकअप : निरु महर्जन
थप तस्बिरका लागि www.rajdhanidaily.com
kathmanducraze.com login गर्नुहोला ।
तपाईं पनि मोडलिङ क्षेत्रमा इच्छुक हुनुहुन्छ ? यस क्षेत्रमा
‘करिअर’को ढोका खोल्न चाहनुहुन्छ ? आउनुहोस्, हामी साथ दिनेछौं ।
Tags: मौलिक संस्कृति मारेको छ